China Oiri Kutenderera Hanger Kugadzira vagadziri uye vanotengesa Sekonic
Oiri Turbing Hanger Kugadzira
Oiri Tubing Hanger :
Iyo tubing hanger yekumisa gungano yeoiri uye gasi tsime rekupedzisa sisitimu uye nzira yekuisa zvakafanana.
chishandiso chinotsigira tambo yetubhu uye inonamira iyo annular nzvimbo pakati petubhu nekasi. Iyo yekuisa chisimbiso nzira yeiyo tubing hanger ndeyekuti iyo tubing hanger uye tubing zvakabatana nekushandisa hunyanzvi hwetubhu kuti ugare mutubing yakaturika hombe ina nzira nzira yekuvhara, iri nyore kushanda, nekukurumidza uye kwakachengeteka kuchinja misoro , saka inzira inowanzo shandiswa yematsime epakati nepakadzika uye matsime akajairika. .
Isu tinogadzira uye Kuwedzera oiri chubhu hanger zvinoenderana nevatengi vanodhirowa, edu matiriral main ndeInconel 718, Inconel 725, Monel 400 uye Inconel x750, Ivo Vakagadzira yekukweva bhawa ine heattreatment mamiriro, Dimension uye tolearnace sekuenderana nevatengi vanodhirowa.
• Yakakwira Tempeature Tubing hanger Zvishandiso:
Zvinoenderana neVatengi Vanodhirowa
nickel base chiwanikwa
Hanger hanger iri mumusoro wehubhu.
♦ Tubing musoro mamiriro
Musoro wehubhu unowanzo kuve wakakura-munzira ina nema flanges kumagumo ese. Iyo yakaiswa pane yekumusoro flange yemusoro wekasingoreti kuti urembedze tambo tambo uye unamate iyo annular nzvimbo pakati petubhu tambo uye mafuta layer casing. Inosanganisira tubing musoro uye tubing hanger.
♦ Iko kushanda kwemusoro wechigubhu
1) Misa tambo yetubing mutsime;
2) Seal iyo annular nzvimbo yeiyo tubing uye casing;
3) Ipa shanduko yekubatanidza casing musoro uye Kisimusi muti;
4) Kubudikidza neepadivi maviri madoko pane iyo tubing musoro muchinjikwa-muviri, yakakwana casing jekiseni uye mushe kusuka mashandiro
♦ ♦ Ros Ngura nemishonga Tubing Hanger Zvinhu Zvimiro: ♦ ♦ ♦
Pashure: Yakakwira Temperautre Chitubu Disc Chitubu Wave Wave Chitubu
Zvadaro: Monel K500 Bhawa / Waya / jira / Ringi
Inconel x750 Tubing Hanger
Monel 400 Tub hanger
Tubing Hanger Manfuacture
Yakakwira Temperautre Chitubu Disc Chitubu Wave Wave Chitubu
Stainless Simbi PH15-7MO
Haynes 25 Waya, stellite mhete, Welding waya, Chiwanikwa R26 bhaudhi, Stellite 6, Stellite 6B,